Sarkaal katirsan Ciidamada Dowladda oo ku dhintay qarax ka dhacay Sh/dhexe.
Wednesday May 29, 2019 - 10:52:45 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in weeraro khasaara lagu gaarsiiyay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Federaalka ay saacadihii lasoo dhaafay ka dhaceen deegaanno hoos yimaad degmooyinka Balcad iyo Mahadaay.
Qarax xooggan oo saaka ka dhacay duleedka Balcad ayaa sababay dhimashada sarkaal sare oo katirsan ciidamada dowladda Dowladda, Jiinoow Cigaal oo kamid ahaa saraakiisha ugu caansan ciidamada dowladda Sh/dhexe ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhitay lala helay kolonyo gaadiid ah.
Jiinoow Cigaal ayaa ahaa sarkaal sedax xidigle ah oo katirsanaa ciidamada Melleteriga waxaana ladhintay mid kamida ciidamadii istaafka u ahaa, wararka ayaa intaas ku daraya in uu dhaawac soo gaaray sarkaal kale oo magaciisa lagusoo gaabiyay Maxamed Raage.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in markii uu dhacay qaraxa lagu sarkaalka kadib uu dhacay qarax kale oo lala helay gaari Cabdi Bile ah oo gurmad ahaan ugasoo dhaqaaqay degmada Balcad.
Dhinaca kale xoogagga Al Shabaab ayaa xalay fiidkii weeraro safballaaran ah ku ekeeyay saldhigyada ciidamada AMISOM iyo maleeshiyaadka dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Ceelbaraf oo hoos yimaad degmada Mahadaay.